बुर्तिवाङ राईजिङ युवा क्लबको निर्वाचन आज, अध्यक्षमा लोप्चन र भण्डारी भीड्दै ! | TAJBIJ.COM
बुर्तिवाङ राईजिङ युवा क्लबको निर्वाचन आज, अध्यक्षमा लोप्चन र भण्डारी भीड्दै !
July 31, 2016 बिमल खड्का	1 Comment
बिमल खड्का, बुर्तिवाङ २०७३ साउन १६ । बुर्तिवाङमा क्रियाशील बुर्तिवाङ राईजिङ युवा क्लबको १४ औ वार्षिकोत्सव एवं आठौँ अधिवेशनको शनिवार स्थानीय समाजसेवी तुलसीराम अर्यालले उद्घाटन गरेका छन् । यस अधिवेशनले क्लबको नयाँ कार्यसमितिको चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आईतबार विहान ११ बजेदेखी सुरु हुने बन्द सत्रमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुन बताईएको छ ।
नयाँ कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा निवर्तमान अध्यक्ष अमर लोप्चन र बिनोद भण्डारीवीच प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । सो पदका अन्य दुई उम्मेदवार नबीन गुरुङ र मदन गौचनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछी लोप्चन र भण्डारीवीच सिधा प्रतिष्पर्धा हुने भएको हो ।
क्लबले प्रत्यक विजया दशमीमा पूर्णिमा मेलाको आयोजना गर्दै आएको छ । मेलामा पुरुष, महिला भलिबल लगायत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता तथा मनोरन्जनात्मक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै आएको छ । क्लबले विभिन्न रचनात्मक कार्यहरु पनि गर्दै आएको छ ।
Previous Postम्याग्दी शिखमा घर भत्किदा पुरिएर एक बृद्धको मृत्यु !Next Postमुस्ताङ जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता भन्दा पासपोर्ट लिनेको संख्या बढी !
One thought on “बुर्तिवाङ राईजिङ युवा क्लबको निर्वाचन आज, अध्यक्षमा लोप्चन र भण्डारी भीड्दै !”
My opinion or vote going to Amar Lopchan he deserve